→ Landa i-WhatsApp mahhala ye-iPhone, i-iPad, iMac noma i-PC | Izindaba ze-IPhone
Landa i-WhatsApp mahhala Kulula kakhulu, ngoba okwamanje, uhlelo lokusebenza lukhululekile kuwo wonke amapulatifomu. Lesi yisona sizathu esikhulu sempumelelo yayo, kanye nokuba nokwenzeka kokutholakala kumakhulu ezigidi zamadivayisi emhlabeni jikelele. Ngakho-ke, sifuna ukukunika isandla sokwazi ukuthi kanjani faka i-WhatsApp mahhala ngendlela elula, sibonga okokufundisa kwethu abazinikele. Ngakho-ke, sebenzisa amamenyu ethu nezigaba ezahlukahlukene ukuthola okokufundisa okudingayo, sizokunikeza lonke ulwazi ongaludinga ukuze ungaphuthelwa isinyathelo esisodwa kukho konke ukufakwa.
Ngaphezu kwalokho, i-WhatsApp ine-legion ebalulekile yonjiniyela ngemuva kwayo, kepha hhayi ngokusemthethweni kuphela, kepha futhi nangokungekho emthethweni, ngakho-ke izinhlobo eziguquliwe zeWhatsApp bezingalahleki, ezaziwa ngokuthi ezidumile WhatsApp Plus, uhlelo lokusebenza lweWhatsApp esivumela ukuthi sithole okuningi kulo, ngoba lifaka imisebenzi emnandi i-application yoqobo engenayo, yingakho sizokusiza ukulanda i-WhatsApp Plus mahhala kalula kudivayisi yakho, izinhlobo zakamuva kokuguqulwa okuthandwa kakhulu yiklayenti lemiyalezo elidume kakhulu endaweni yonke yezobuchwepheshe.
1 Jabulela i-WhatsApp kunoma iyiphi idivayisi
2 Faka i-WhatsApp ku-PC
3 Yini iWhatsapp?
4 Ungahlala ubuyekeza i-WhatsApp
5 Uhlelo lokubethela lwe-WhatsApp
6 I-WhatsApp ishintshe izimpilo zethu
6.1 Ezinye izindlela ze-WhatsApp
7 Yazi i-WhatsApp Plus kanye nokuhlukahluka kwayo
8 WhatsApp kwamanye amazwe
9 Izinto obungazazi ngeWhatsApp
Jabulela i-WhatsApp kunoma iyiphi idivayisi
Icala I-WhatsApp ye-iPhone kuhlukile. Ipulatifomu ye-Apple iyona ezala iWhatsApp njengeklayenti lokuthumela imiyalezo, yafika ngo-2010 ku-iOS App Store ngentengo ka- € 0,99, futhi lokhu kukuqinisekisile ngenkonzo yempilo, okuwukuthi, wawungenasidingo sokuvuselela i-WhatsApp mahhala, kepha i-WhatsApp ibisebenza njalo ngemuva kokuthenga kokuqala. Kamuva i-WhatsApp yabuye yakhululeka ngo-2013, kodwa-ke, yaba insizakalo yokubhaliselwa yonyaka, yabiza u- € 0,99 unyaka wenkonzo. Okuthile ngemuva kokutholwa kwe-Facebook sekuqediwe ngokuphelele, manje ukulanda i-WhatsApp mahhala kungenzeka ngokuphelele, naphakade.
I-WhatsApp ngokusobala yethulwe ku-Blackberry Futhi, ngaphandle kokuthi namuhla uhlelo oluyekile ngenxa yokunyamalala kwenkampani, iWhatsApp iyaqhubeka nokusebenza ngokugcwele futhi mahhala kulolu hlelo lokusebenza. Yize yayine-BBPin njengembangi enkulu kuleli cala, i-WhatsApp iphinde yakwazi ukuphatha uhlelo ngokuthanda, futhi abasebenzisi abaningi bakhetha ukukhetha iklayenti lokuthumela imiyalezo elithandwa kakhulu emakethe, asibasoli. IBlackBerry yakhelwe ngqo lokho, amakhibhodi ayo aphathekayo ahlinzeka ngesivinini sokuthayipha nobulula amanye amadivayisi angafinyeleli kuwo.
Akunakuphuthelwa futhi WhatsApp ku-Android, uhlelo olusebenzayo emakethe, lubusa cishe ama-70% wamadivayisi eselula emhlabeni wonke, ngakho-ke i-WhatsApp inamandla ku-Android kunanoma yiluphi uhlelo lokusebenza. Le nkundla bekungokokuqala kuyo landa i-WhatsApp mahhala Kungenzeka futhi ukuvuselela ukubhaliswa kwesicelo akuzange kube yisidina kakhulu ku-Android, ngoba njengoba izinsuku zihamba ukufinyelela kwaphinde kwasebenza futhi ukuvuselelwa konyaka owodwa kwavela ndawo. Landa i-WhatsApp ye-Android Kulula njengokuya ku-Google Play Isitolo nokusesha phakathi kwezinhlelo zokusebenza ezilandiwe kakhulu, kuhlala njalo futhi kuzohlala kuphakathi kwezokuqala.
Okufanayo kuya ngamaphilisi ahlakaniphile, landa i-WhatsApp yethebhulethi Kungenzeka impela, futhi sithola ezinye izindlela eziningi, ikakhulukazi lapho idivayisi okukhulunywa ngayo isebenzisa uhlelo lokusebenza lwe-Android. Sinethuba lokuyifaka usebenzisa i-SIM khadi kuthebhulethi uqobo, noma sisebenzise noma iyiphi enye i-SIM khadi evela kuselula. Ngaphezu kwalokho, inguqulo yeWhatsApp Web ingasetshenziswa kumathebulethi kusetshenziswa imodi yedeskithophu kusiphequluli esisithandayo, ngakho-ke sizoba nohlobo lweWhatsApp kuthebhulethi ngaphandle komzamo omkhulu.
Kodwa-ke, amaphilisi athandwa kakhulu yi-iPad ngqo. Esimweni esinjalo, faka i-WhatsApp ngokwendabuko, okusho ukuthi, njengohlelo, kunzima kakhulu, futhi singaqhuba le nhlangano sisebenzisa ithuluzi elifana neJailbreak, kepha, njengamaphilisi e-Android, kungenzeka ukusebenzisa insiza yeWhatsApp Web kalula futhi kufinyeleleke kunoma iyiphi isiphequluli ku-iPad yethu, ukuze sikwazi ukusebenzisa I-WhatsApp yamahhala ku-iPad Ngaphandle komzamo omkhulu, kuzofanele sifinyelele isevisi yeWhatsApp Web kusuka kusiphequluli seSafari uqobo bese ukhetha imodi yenguqulo yedeskithophu.
Faka i-WhatsApp ku-PC
NgoMeyi 2016, saba nezindaba zokuthi ekugcineni iWhatsApp inqume ukwethula uhlobo lwe I-WhatsApp ye-MacNgakho-ke, singalanda uhlelo lweWhatsApp ngqo kwi-Mac yethu ngokushesha futhi sixoxe nabo bonke oxhumana nabo ngayo yonke induduzo yekhibhodi nesikrini sekhompyutha yethu, noma ngabe ilaptop efana neMacBook noma ideskithophu efana neMac, okubalulekile into ukuthi sikwazi ukuxhumana nabangane bethu nabathandekayo ngenxa yokusetshenziswa kwe I-WhatsApp ye-Mac.
Kepha akuyona yonke into ehlala lapha, futhi kungukuthi ukusetshenziswa kwe I-whatsapp ye-pc wafika ngasikhathi sinye. Noma iyiphi ikhompuyutha uhlelo lwayo okuyiWindows 8, Windows 8.1 noma iWindows 10, ingalanda i-WhatsApp ye-PC bese iyisebenzisa ngokwendabuko njenganoma yiluphi olunye uhlelo lokusebenza. Okuwukuphela kwephuzu elibi ukuthi i-WhatsApp Web client elula, hhayi uhlelo lokusebenza oluhlukile. Kodwa-ke, asikwazi ukuxoxa nabo bonke oxhumana nabo njenge-WhatsApp ye-iPhone ne-WhatsApp ye-Android, kepha futhi singathumela nemibhalo koxhumana nabo, futhi-ke, sabelana ngezithombe esinazo kwi-PC yethu.
I-WhatsApp uhlelo lokusebenza lokuthumela imiyalezo oludume kakhulu ezikhathini zamuva. Akuyona kuphela uhlelo olusetshenziswa kakhulu kuma-smartphones amaningi emhlabeni wonke, kodwa futhi kushintshe indlela esixhumana ngayo nawo wonke umuntu, lolu hlelo lokusebenza lwenze lula ngokwedlulele ukuthi kungenzeka kuthunyelwe imiyalezo koxhumana nabo. Empeleni, singaze sicabange ukuthi indlela esikhulumisana ngayo nabantu esibathandayo isishintshile, isivele yavela kakhulu ngokuhamba kwesikhathi, kepha ingqikithi ihlala injalo, thumela imiyalezo ngokushesha.
Bekucabanga ukonga okukhulu kwizikweletu zabo bonke abantu, ngoba ngobuchwepheshe obukhulayo be-3G izicelo eziningi zaqala ukwanda, kepha, ayikho neyodwa ehambisana nezinto eziningi, kulula ukuyisebenzisa futhi iyashesha njenge-WhatsApp. Kungakho, basike umgodi ngokushesha bafaka iPIN ye-BlackBerry. Kwakulula ukuthumela imiyalezo enganqunyelwe futhi engenamkhawulo ngesikhathi sangempela, ngaphezu kwalokho, ngemuva nje kokuvunyelwa ukudala amaqembu oxhumana nabo engxoxweni efanayo, kanye nomsebenzi wokuthumela izithombe, ukukhulisa i-WhatsApp phezulu kuyo yonke imali engenayo uhlu nempumelelo, noma ngabe iyiphi ingxenyekazi.
Uhlelo lokusebenza lwafika okokuqala ku-iOS App Store ngoJanuwari 2010, ngakho-ke, njengamanje uhlelo lokusebenza seluneminyaka engaphezu kwengu-40 ubudala. Kepha ngokuhamba kwesikhathi ithole ukuhambisana kwe-Android, BlackBerry, Windows Phone, Symbian kanye ne-SXNUMX Series. Eziningi zalezi zinhlelo zokusebenza zanyamalala ngenkathi i-WhatsApp iqhubeka nokubamba phezulu. Kungakho singeke singabaze impumelelo yayo, I-WhatsApp iguqule umhlaba wokuthumela imiyalezo njengoba sazi.
Igama lesicelo livela kule nkulumo ngesiNgisi "Kwenzenjani?", ukubingelela okufudumele ngemfashini phakathi kwentsha. Ngayo yonke into nalokho, obekuhlala kungapheli kube wuphawu lwayo oluhlaza, ibhaluni lomyalezo eliqukethe ucingo ngaphakathi, elula kodwa eqondile, isithonjana esaziwa umhlaba wonke, njengoba kungaba omunye umkhiqizo omkhulu, futhi lokho kuyi-WhatsApp ingxenye yempilo yansuku zonke yamakhulu ezigidi zabantu emhlabeni wonke, njengawe, osifundayo. Kungakho uze kuleli khasi, ngoba sifuna ukukufundisa konke ngalolu hlelo lokusebenza oluhle, ukuze uzuze kakhulu kulo futhi ujabulele ukuxoxa nolwakho. Ubuwazi ukuthi sekukhona abantu abahluphekayo Umlutha we-WhatsApp?
Ungahlala ubuyekeza i-WhatsApp
Ukubuyekeza i-WhatsApp kulula, noma ngabe iyiphi ipulatifomu yakho, kufanele nje uye ku-App Store ye-iOS bese ubheka kuzibuyekezo ukuze wazi ukuthi yisikhathi noma cha buyekeza i-WhatsApp. Esinye sezibuyekezo ezithandwayo ze-WhatsApp ye-iOS yilokho okubizwa ngokuthi "ukulungiswa kwamaphutha", okuvame ukuthuthukisa ukusebenza kohlelo lokusebenza, kepha kufihla izindaba eziningi ezizovela kungekudala. Ngakolunye uhlangothi, esimweni se-Android, umsebenzi uyafana, kufanele siye ku-Google Play Isitolo, futhi lapho nje singena, izosazisa ngezinhlelo zokusebenza ezidinga ukuvuselelwa.
Uhlelo lokubethela lwe-WhatsApp
Ngenxa yokukhula kwezidingo zokuphepha ngokuhamba kwesikhathi, iWhatsApp inqume ekuqaleni kuka-2016 ukufaka uhlelo lokubethela imilayezo. Uma kunokwenzeka, izingcingo nemiyalezo ethunyelwe ibethelwe ukuphela-kuya-ekupheleni, okusho ukuthi i-WhatsApp nabantu besithathu abakwazi ukulalela noma ukufunda. Isaziso sokuphepha esincane sizoboniswa njalo lapho siqala ingxoxo nomsebenzisi omusha ukusazisa lokho konke ukuxhumana kwethu kuvikelekile futhi kubethelweI-WhatsApp ibheje kakhulu kwezokuphepha nobumfihlo, futhi akuyona into esingayidelela, namuhla kubaluleke kakhulu ukugcina idatha yethu iphephile.
I-WhatsApp ishintshe izimpilo zethu
Ngokwezifundo zakamuva, Ama-53% abantu baseSpain baxoxa phakathi kuka-5 no-50 kuWhatsApp ngosuku, futhi akuyona into esimangazayo, abaningi bethu basebenzisa lolu hlelo lokusebenza njengezindlela zethu eziyinhloko zokuxhumana, inani labo elikhulu labasebenzisi emhlabeni jikelele linika ithemba elihle kulo. Okwamanje, i-90% yabasebenzisi be-WhatsApp bangabasebenzisi abakhuthele, okusho ukuthi, basebenzisa insiza ngaphezu kokukodwa ngosuku, okuyenza indlela yokuxhumana yangempela. Uhlelo lokusebenza olusetshenziswa kakhulu lokuthumela imiyalezo nge-98,1% yabo bonke abasebenzisi, ngaphezu komncintiswano onjengeTelegram, i-Skype noma i-Facebook Messenger.
NgoFebhuwari 2016, UWhatsApp wephule umgoqo wabasebenzisi abayizigidigidi, insizakalo yemiyalezo idlula ababhalisile be-Facebook Messenger ngezigidi ezingama-200, ngokwesibonelo. Ngokwezibalo zakamuva, amaseva we-WhatsApp aphatha imiyalezo ezungeze izigidi ezingama-42.000 namavidiyo angaphezu kwezigidi ezingama-250 ngosuku, umthwalo obaluleke impela, okufakazela ukuthandwa kwaleli klayenti lokuthumela imiyalezo nokuthi imodi ishintsha kanjani lapho sikhuluma futhi sixhumana khona nabangane. , abathandekayo nazo zonke izidalwa ezisizungezile.
Ezinye izindlela ze-WhatsApp
Kodwa-ke, yize isetshenziswa kakhulu emhlabeni jikelele, kunezimakethe eziyiphikisayo, njengeChina, lapho zithanda khona WeChat, South Korea, lapho kubusa khona uKakao Talk, noma iJapan, lapho Line iyaqhubeka nokugcina isikhundla sayo sokubusa. Kodwa-ke, ngeqiniso lokuthi uhlelo lokusebenza selumahhala impilo yonke nokwethulwa kweWhatsApp Web, kuya ngokuya kujoyina.
Yazi i-WhatsApp Plus kanye nokuhlukahluka kwayo
Yize zingatholakali nge-iOS (ngaphandle kokuthi une-jailbreak), eziningi Ukulungiswa kwe-WhatsApp Plus enziwe ngonjiniyela abahlukahlukene. Ngokwesibonelo, I-WhatsApp Plus Holo, eyayiyinguqulo yeWhatsApp Plus eyayivumela ukusetshenziswa kwesixhumi esibonakalayo seHolo kulawo madivayisi e-Android ayengakavuselelwa. Le nguqulo ye-Holo inqanyuliwe ekupheleni konyaka odlule ngenxa yokuthi amadivayisi amaningi we-Android asevele enesixhumi esibonakalayo esishiwo ngaphambili. Kodwa-ke, eminye imithombo ivelile, njenge I-WhatsApp Plus Jimods, ukuguqulwa kweWhatsApp okususelwa kokunye kokuhlanganiswa kwayo kwakamuva, okwenza kube ngenye yezinguqulo ezizinzile kakhulu esingazithola enetheni.
Kule ndawo uzothola lonke ulwazi oludingekayo, konke ukulungiswa kwe-WhatsApp, izinhlobo zokuqala, kanye nezifundo ezilula nezifinyeleleka ukuze ukwazi ukusizakala Mahhala. Kubalulekile ukuthi sazi ngokujulile uhlelo lokusebenza olusetshenziswa kabanzi njenge-WhatsApp, futhi ngaphezu kwakho konke esikwaziyo ukulinganiselwa kwalo, amanani nokutholakala kwalo. Ukusetshenziswa kwalezi zici kungaba inkemba esika nhlangothi zombili kuye ngokuthi yiziphi izimo, ngakho-ke siyibuka ngokuqapha nangobuchwepheshe obuningi.
WhatsApp kwamanye amazwe
Indlela i-WhatsApp eyehlise ngayo imingcele yezwe nayo kufanele ishiwo, umbuzo uphakama wokuthi ngabe Ngingasebenzisa i-WhatsApp ngaphandle kwezwe lami, futhi impendulo inguyebo ngokuphelele. I-WhatsApp izosebenzela mahhala noma kuphi noma idivayisi esetshenziswe ngaphambilini futhi enokuxhumeka kwe-inthanethi, kungaba i-3G noma i-WiFi. Ngaphezu kwalokho, ngeke silahlekelwe ngumsebenzisi ngaphandle kokuthi sikhiphe uhlelo, ngakho-ke i-WhatsApp kulula ukuyisebenzisa kunoma yiliphi izwe, singaqhubeka nokuxhumana nabantu esibathandayo noma ngabe sikuphi, sidinga kuphela ukuxhumana kwe-inthanethi.
Okunye okungenzeka kube yi-WhatsApp, ukuthi singakwazi sebenzisa i-akhawunti yethu efanayo ye-WhatsApp noma ngabe yiliphi ikhadi esethule. Okusho ukuthi, uma, ngokwesibonelo, sisebenzise i-WhatsApp yethu ngekhadi likazwelonke, kepha sizoya phesheya futhi sikhetha ukukhokha amanani wedatha akhona ezweni esiya kulo, kufanele sifake ikhadi bese siqhubeka nokujabulela it, ngoba oxhumana nabo Bangaqhubeka nokuxoxa nathi ngenombolo yethu yangaphambilini exhunywe kuWhatsApp, indlela enhle yokuqhubeka nokukhuluma nabangane bethu lapho sihlala phesheya, noma sinenye inombolo yocingo lapho yokusizakala ngamazinga kazwelonke.
Izinto obungazazi ngeWhatsApp
UWhatsApp wazalwa ngo-2009. Emuva ngo-2014, i-WhatsApp yatholwa yi-Facebook ngokushintshanisa ama-dollar ayizigidi ezingama-19.000, mhlawumbe owawungazi ukuthi yi- igama labadali beWhatsApp, UJan Koum noBrian Acton, bashiye i-Yahoo ngo-2009 futhi banikela ngezinsizakalo zabo ku-Facebook naku-Twitter, zombili izinkampani zabenqaba, futhi abazi ukuthi bazisola kangakanani, futhi lokho ngukuthi i-Facebook yayingasindisa izigidigidi zamadola ukube babeqashe kubo. Ukungabaqashi kusize abadali ngokumangalisayo, asebengosozigidi ngendlela eyiqhawe kakhulu.
Esinye isici ongahle ungasazi ukuthi I-WhatsApp ayikaze isebenzise ngisho isenti elilodwa ekukhangiseniNjengoba inkampani ingakaze ibeke isikhangiso noma yikuphi ukukhuthaza uhlelo lwayo lokusebenza, impumelelo yaba ngumlomo. Ngaphezu kwalokho, kwenza opharetha balahlekelwe yimali eningi, okokuqala ngokususa i-SMS futhi manje futhi engeza nethuba lokushaya izingcingo zeVOIP ngeWhatsApp. Kodwa-ke, amakholi wevidiyo nawo asendleleni kuWhatsApp, okungasho enye inguquko ethokozisayo endleleni esixhumana ngayo, iWhatsApp iguqula konke ekuthintayo, futhi lokho ukuthi iqembu labasebenzisi bayo elizolandela lapho lizoya khona.
Sithemba ukuthi uzothola noma yini oyifunayo i-wasap Lapha, sinakho konke ongakudinga okuhlobene nesicelo esihle kakhulu sokuthumela imiyalezo emakethe. Uma ufuna download whatsapp mahhala, lapha uzothola konke okudingayo.